အသဲကွဲမြို့ တော်: November 2012
အသဲကွဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ... ( အဆွေးလူ )
အသည်းကွဲမြို့ တော်သို့ ရောက်လာသောမိတ်ဆွေများကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်နော်...စိတ်၏ချမ်းသားခြင်း...ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ
အနာဂတ်ကောင်းကင် မိသားစုဝင် မိလရိပ်အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်း
အနာဂတ်ကောင်းကင်အတွင်းမှ ထင်ရှားသောမိသားစုဝင် မန်ဘာတွေရဲ့ 
မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ ရက်မြတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာစုပေါင်း တောင်းဆုချွေခဲ့ကြရင်း
အခုဆိုရင် ကောင်းကင်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့
မိလရိပ် ရဲ့မွေးနေ့ ရက်မြတ်သို့ပြန်လည်၍ ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ
ကောင်းကင်ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိလရိပ် လည်း
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ ရက်မြတ်မှစပြီး
Posted by အဆွေးလူ at 22:59 1 comment:
နည်းပညာဆိုဒ်များစေတန်ဂေါ့သံလုံငယ်ညီလင်းဆက်ညီနေမင်းစံပီးမောင်ပညာမောင်စေတနာကိုThinkerကိုရန်အောင်ကိုမင်းကျော်အမေ့သားနေလင်းဖြိုးဆိုက်(၁)အမေ့သားနေလင်းဖြိုးဆိုက်(၂)HTMLလေ့လာရန်နေ၇ာအမေ့သားနေလင်းဖြိုးဆိုက်(၃)ကိုကျော်စွာငြိမ်းထွဏ်းနေသွေးဧရာမြေ(နည်းပညာ)စောနေသွေးကိုဇော်357ကို‌ဇော်(ဒဂုံ)ကိုချစ်ဦးကိုကျော်ကျော်ဦးစပ်မိစပ်ရာစိုင်းနက္ခတ်ဖိုးသားတူလေးပုဂံသားမောင်ဘကျော်ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာမုန်တိုင်းရာမညဖိုးလပြည့်အလင်းရောင်အညာသားဟိုက်ဝေးအိုင်တီခရီးသည်အိုင်တီမန်းနည်းပညာမှတ်တမ်းမာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများမနောသားမနောဖြူလေးမိုးမြင့်ရှိန်းမိုးထက်မြင့်လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာမလေးရှားရောက်မြန်မာဟင်းလင်းပြင်ကျနော့မှတ်စုစာအုပ်ကနက်သီရီသားလေးညီညီ(လောကမီးအိမ်)ဧရာညီနောင်အီလက်ထရောနစ်ဘုရင့်နောင်ဝိုင်းBurma IT ShareCo2'sNoteSTAMEDIAOgreKP3 FamilyKogee LayWWMMMBloggerHelpdeskMyanmar DownloadMyanmarITMenMy SoftwaresThememagicMonGTCTroj4nEngineer4Myanmarလေ့လာစရာဆိုဒ်များMyanmardailyအဝါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်Exam CollectionMyanmar telt:Dictionary
http://www.futuresky-peace.com/profile/ahsawelu. Awesome Inc. theme. Theme images by fpm. Powered by Blogger.